Ungakwenza Kanjani Uma I-Shower Ivinjiwe Futhi? Ungasheshi! Yisebenzise Ukucwilisa ... Isimangaliso! Shesha Ukutshela Amakhasimende Akho!
Ikhaya / Blog / Ungakwenza Kanjani Uma Umbukiso Uvinjelwe Futhi? Ungasheshi! Yisebenzise Ukucwilisa… Isimangaliso! Shesha Ukutshela Amakhasimende Akho!
Ungakwenza Kanjani Uma Umbukiso Uvinjelwe Futhi? Ungasheshi! Yisebenzise Ukucwilisa… Isimangaliso! Shesha Ukutshela Amakhasimende Akho!
2021 / 01 / 11 UkwahlukanisaBlog 9105 0
Isikole Sebhizinisi Langasese 2020-11-24
Ukugeza, sisebenzisa nsuku zonke. Kepha uthole ukuthi inhloko yeshawa esetshenziswe isikhathi esithile igcwele amabala esikali esiphuzi? Lokhu akubukeki kungcolile kuphela kepha kuthinta namanzi aphuma eshaweni. Noma ngabe isulwa ngendwangu noma ibhulashi, ngemuva komzamo omkhulu, isikali kusenzima ukusisula. Kuleli qophelo, yini okufanele uyenze? Ungajahi! Intombazane yokugezela elandelayo ikufundisa izindlela ezimbalwa ezilula ~
I-Shower Head Iminyene, Isixazululo Sokukhohlisa.
Ikhanda leshawa lizovalwa ngemuva kwesikhathi eside lisetshenzisiwe. Lokhu kungokwemvelo kakhulu. Lokhu akusho ukuthi ikhanda leshawa liphukile, ungakhathazeki, asikho isidingo sokuthenga esisha. Lokhu ikakhulukazi kungenxa ye-limescale eyenzeka ngemuva kwesikhathi eside sokukhishwa kwamanzi. Udinga nje ukuqaqa ikhanda leshawa ukulihlanza.
1, Ngemuva kwesikhathi eside sokukhishwa kwamanzi, kunzima kwezinye izinto eziyimbudumbudu epayipini lokungena noma emanzini kampompi ukuphuma emgodini wokukhipha, futhi kuzoba lula ukuvimba imbobo yokuphuma. Susa ikhanda leshawa bese ngobumnene unyakazisa itheku lamanzi ulibhekise ezansi ukuze uthele imvuthuluka ngaphakathi. Nakekela ukonga izesekeli lapho uqaqa umbhobho.
2, khetha isitsha esingabeka phansi umbhobho, uthele uviniga omhlophe, okokuhlanza indishi yangasese noma okokuhlanza okhethekile kwe-limescale, i-asidi ebuthakathaka. Faka umbhobho ekugcineni kokucwiliswa kwamanzi isikhathi esithile (ihora eli-1 kufanelekile), sebenzisa ibhulashi lamazinyo elincane noma elinye ibhulashi elihlanzekile ukuxubha, bese ubeka amanzi okugeza.
3, ngemuva kokugeza amanzi, sula uhlanzekile ngendwangu ezungeze umgodi wamanzi kanye nobuso besikali. Hlangana nokufakwa kwemali "okunenkani" ngaphezulu, ungasebenzisi inaliti. Sika ngozipho uze uwele, bese uhlanza ngendwangu.
Izindlela Zokulungisa Ukugeza
1, ukusetshenziswa kwezinga lokushisa elifanele akufanele kudlule ama-degrees Celsius angama-70. Ukushisa okuphezulu nokukhanya kwe-ultraviolet kuzosheshisa kakhulu ukuguga kweshawa, kunciphise impilo yenkonzo yeshawa, ngakho-ke ukufakwa kweshawa kude ngangokunokwenzeka kusuka kubhavu nakweminye imithombo yokushisa kagesi. Ukugeza akunakufakwa kubha yokugezela ngqo ngezansi, futhi ibanga kufanele libe ngaphezu kwe-60CM.
2, endaweni yekhwalithi yamanzi enzima, sicela uzame ukusebenzisa ishawa ngezinhlayiya zenjoloba noma ngedivayisi eqondile ehlanzekile. Noma imbobo yokuphuma kweshawa igcwele isikali, kulula ukuyihlanza. Khumbula ukuthi ungahlukanisi ngenkani ishawa. Ngenxa yokwakheka kwangaphakathi kweshawa, ukuqaqa okungeyona ingcweti okuphoqelelwe kuzoholela eshaweni kungabuyiselwa esimeni sayo sokuqala.
3, vula uphinde uvale ompompi bokugeza bese ulungisa indlela yamanzi eshawa ungaphoqeleli kakhulu, ngobumnene ujike i-homeopath. Ngisho nompompi wendabuko, nawo awudingi ukuchitha amandla amaningi. Naka ngokukhethekile hhayi isibambo sepompo, isibakaki seshawa njenge-handrail yokusekela noma yokusebenzisa.
4, i-hose yekhanda yensimbi yekhanda kufanele igcinwe isesimweni sokwemvelo, ungayifaki ngompompi lapho ingasetshenziswa. Ngasikhathi sinye, naka ukuhlangana kwepayipi nompompi akwenzi ukuphela okufile, ukuze ungaphuli noma ulimaze ipayipi.
5, njalo ezinyangeni eziyisithupha noma ngaphansi, ishawa izosuswa ibekwe kubheseni omncane. Thela bese ucwilisa ingaphakathi nangaphakathi kweshawa ngoviniga omhlophe odliwayo amahora angu-4-6, bese usula ngobumnene ubuso beshawa lapho ukhipha khona insimbi ngokhuni. Phinda ufake isixhumi bese udlulisa amanzi umzuzwana, bese ulinda uviniga omhlophe nesikali ukuze kuphume namanzi, ukuze kuqedwe noma kunciphise amandla esikali eshaweni, futhi kungaletha umphumela wokuvala inzalo.
Izeluleko Zokuhlanza Amashawa
1, ompompi beshawa abafakwe odongeni ngokuvamile bagqama kakhulu, ngakho-ke qaphela ukuthi ungashayisi noma ucindezele lapho ufaka izinto. Gwema ukuthintana namasongo nezinye izinto ezinzima ngangokunokwenzeka ukugwema ukulimala okubulalayo.
2, inqubo yokuhlanza ekahle ukugeza ipayipi ngamanzi, bese usula wonke amanzi ebusweni bensimbi ompompi ngendwangu ethambile, ngoba amanzi azokwakha isikali ebusweni bensimbi ngemuva kokuhwamuka. Sula ngobumnene, ungazikhuhli ngamandla. Yomile ngesiponji esimanzi nesikhumba esithambile, ingenza isibani sephepha sikhanye futhi sikhanye.
3, njengesidingo somsebenzi omningi wokuhlanza, kungcono ukusebenzisa i-liquid liquid cleaner ehlanzekile, noma engeyona i-asidi, uketshezi oluthambile nolungancibiliki ngokuphelele nophawuda oncibilika ngokuphelele, isisombululo se-non-frictional solution ungasusa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kusifihla-buso esiqinile nesakhi. Ungasebenzisi noma yiziphi izinto zokuhlanza, izindwangu noma izindwangu zamaphepha, nanoma yikuphi ukuhlanza okuqukethe i-asidi, izipholishi zokupholisha noma izihlanza ezimahhadla. Lapho ukuhlanza sekuphelile, susa yonke into yokuhlanza ngamanzi bese uyisula ngendwangu kakotini ethambile.
Edlule :: Izindlu Zokugeza Zingavuselelwa !!! Abantu Bokugeza Bazokwazi Olandelayo: Dizayina Igumbi Lokugeza Ekhaya Ukuze Lihle Futhi Ube Nesimo Esihle Esikhathini Sokugeza Zonke Izinsuku
Indlu yangasese yango-2021 Wall-Hung Toilet Ungayihlobisa kanjani iValiant And Beautiful?
Indlu yangasese ye-5M², Ungayithola Kanjani I-Bath + Shower? Inezinsizakusebenza